Karate – Antananarivo: efa miomana amin’ny fifidianana - ewa.mg
Karate – Antananarivo: efa miomana amin’ny fifidianana
News - Karate – Antananarivo: efa miomana amin’ny fifidianana
Efa eo am-piomanana tanteraka
amin’ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny seksiona
ankehitriny, ny eto Antananarivo Renivohitra taranja Karate.
Tapitra amin’ity taona ity mantsy ny fe-potoana hitondran’ny
mpitantana am-perinasa ka tsy maintsy miroso amin’ny fifidianana,
araka ny nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga Karate,
Rakotomalala Jean Paul. Araka izany, mitaona ireo klioba rehetra
eto Antananarivo Renivohitra ny federasiona, hanontany izay tokony
ho fantatra mahakasika ny “certificat de conformité”. Voakasika
izany avokoa na ireo efa mijoro ara-dalana na tsia, raha ny
fanazavana hatrany. Eny amin’ny Delegen’ny tanora sy
fanatanjahantena Antananarivo Renivohitra etsy Ambohidahy ny
hahafahana mahazo fanampim-panazavana mahakasika izay.
Raha ny tokony ho izy, ny volana
aogositra ny fotoana efa napetraka hanaovana ity fifidianana ity,
saingy tsy tontosa izany noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana
teto amin’ny firenena. Araka ny loharanom-baovao, maro ny hirotsaka
amin’ity indray mitoraka ity, mbola tsy fantatra kosa raha mbola ho
isan’ny ho kandida ny filoha am-perinasa na tsia.
L’article Karate – Antananarivo: efa miomana amin’ny fifidianana a été récupéré chez Newsmada.
Fetin’ny Fahaleovantena: polisy miisa 1 025 indray hahetsika
Polisy miisa 1 025 no hahetsika isan’andro eto Antananarivo, manomboka rahampitso mba hahafahan’ny vahoaka mifety am-pilaminana, araka ny nambaran’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny contrôleur général de police, Rafanomezantsoa Roger nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly teny amin’ny minisitera Anosy. Nambarany fa ireo polisy ireo dia itambaran’ny polisy miasa avy ao amin’ny police urbaine, ny Fip, ny USPN, ary ny polisy tsy manao fanamiana. Mitsinjara ho toy izao ny fizaran’asan’izy ireo : ny fandrindrana ny fifamoivoizana : polisy miisa 412, ny fisorohana ny fandikan-dalàna : polisy miisa 257 isan’andro ary ireo polisy mandefa fiara sy mandeha an-tongotra miisa 190 isan’andro ary ireo polisy tsy manao fanamiana miisa 90. Nambaran’ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena ity fa hisy ny fepetra manokana horaisina ho fandrindrana ny fifamoivoizana sy ny filaminana manodidina ny farihin’Anosy ary manerana ireo toerana avo eto an-dRenivohitra ny harivan’ny 25 jona izao izay hisian’ny afomanga lehibe. Hisokatra ho an’ny rehetra koa ny “quartiers généraux” roa ao amin’ny kaomisarian’Analakely izay azo antsoina amin’ny laharana 034 05 517 31 sy ny ao amin’ny kaomisarian’i Mahamasina izay azo antsoina amin’ny laharana 034 05 517 16 mba hahafahana mandray ny fitarainan’ireo olona.Jean ClaudeL’article Fetin’ny Fahaleovantena: polisy miisa 1 025 indray hahetsika a été récupéré chez Newsmada.
Masoivohon’i Frantsa: hisolo an’i Veronique Vouland-Aneini i Christophe Bouchard
Voatendry ho ambasadaoro vaovao ho an’i Frantsa hiasa sy honina eto amintsika, ny volana mey lasa teo, i Christophe Bouchard. Handimby toerana ny teo aloha, i Véronique Vouland-Aneini, nalefa niasa any Jordanie, ny tenany. Nivoaka tao amin’ny ivontoerana IEP ao Paris sy ny ENA ity ambasadaoro vaovao ity. Efa niasa teo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny frantsay niasa tany Afrika Avaratra sy ny faritra Moyen Orient iny ny tenany ny taona 1989. Efa mpanolotsain’ny minisitra Laurent Fabius misahana ny lafiny diplaomasia koa izy ny taona 1997. Ankoatra izany, andraikitra nosahaniny ny maha mpanolotsaina voalohany azy teo anivon’ny ambasady frantsay tany Alzeria ny taona 2005. Masoivoho niasa tany Niger taty amin’ny taona 2011. Mialoha izao fanendrena zao, talen’ny fitantanan-draharaha ho an’ny konsily sy ny Frantsay any ivelany (DFAE) tao Paris, hatramin’ny taona 2015.Synèse R. L’article Masoivohon’i Frantsa: hisolo an’i Veronique Vouland-Aneini i Christophe Bouchard a été récupéré chez Newsmada.
Misy manao tery vaimanta: miteraka olana ny fotoana ianarana zavakanto
Tontosa, ny faran’ny herinandro teo, ny fihaonan’ireo mpampianatra zavakanto eto an-dRenivohitra. Anisan’ny olana goavana nisongadina sy nivoitra nandritra izany ny halavan’ny fotoana ianarana ireny zavakanto ireny. Olana nohazavan’ireto mpampianatra zavakanto ireto fa: “vokatry ny fiainana rotoroto lava” no niteraka azy. Nanterin-dry zareo hatrany anefa fa “tafiditra ao anatin’ny fahalalana ara-panahy ny zavakanto ka tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy ny fianarana azy”. Raha ny fanazavan’izy ireo hatrany, “tsy asan’ny saina tahaka ny manao kajy ny zavakanto fa asan’ny fanahy. Tsy ao anatin’ny fotoana fohy ny ahafahana mamoha io fanahy io”.Ny ankamaroan’ny olona te hianatra zavakanto amin’izao fotoana izao anefa, mitaky fotoana fohy. Ohatra nisongadina tamin’ity fihaonana ity ny fanazavan’ny mpampianatra kabary iray fa, “maro ny olona tonga ao aminay mangataka hianatra kabary ao anatin’ny herinandro fa amin’izay ihany, hono, izy ireo no manam-potoana. Amin’ny fomba ahoana ny hampianarana kabary ao anatin’ny herinandro”? Nohazavan’ireto mpampianatra kabary ireto fa mbola misy zavatra maro fohazina vao afaka mikabary ny olona iray.Ankoatra io fangatahana ny hianarana zavakanto ao anatin’ny fotoana fohy io, mahatsapa ihany koa ireto mpampianatra zavakanto ireto fa mandeha ila ny fahafantaran’ny Malagasy sasany ny antsoina hoe “mianatra”. Ny ankamaroan’ireo olona liana momba ny fampianarana mantsy ny manontany hoe: “mianatra impiry aho dia mahay”?. Tsy miankina amin’ny mpampianatra irery anefa ny hahaizan’ny mpianatra na tsia fa mifameno.… Tsy vita ao anatina fotoana fohy ny mianatra zavakanto… Dia ahoana ity Malagasy milaza fa tsy manam-potoana lava ity? Ahina ny hoavin’ny zavakanto malagasy, raha izany!HaRy RazafindrakotoL’article Misy manao tery vaimanta: miteraka olana ny fotoana ianarana zavakanto a été récupéré chez Newsmada.
RyKala Vazo: nodimandry i Mitchou
Misaona ny tontolon’ny zavakanto malagasy. Namoy an’i Mitchou Amy ny tarika RyKala Vazo. Mpanakanto tanora nahavita be tokoa eo amin’ny tontolon’ny hira, ny fitendrena zavamaneno, sns.Lavo ny andrarezin’ny zavakanto malagasy! Nodimandry teo amin’ny faha-34 taony, ny alin’ny asabotsy 25 mey teo, Andriambolatiana Miarintsoa, fantatra amin’ny anarana maha mpanakanto Mitchou, iray amin’ireo mpikambana ao amin’ny tarika RyKala Vazo. Raha ny fanazavana azo, tratry ny « accident vasculaire cérébral ischémique » intelo nisesy izy tao anatin’ny iray volana ka ny fahatelo (tamin’ny 20 mey) teo no vao mainka naharatsy ny fahasalamany.Manana talenta maro i Mitchou. Ankoatra ny fihirana, mitendry zavamaneno izy. Anisan’ireny ny gitara beso sy ny cajón. Ny taona 2009, nitendry amponga maroanaka teo anivona tarika mpiangaly mozika i Mitchou. Havanana amin’ny dihy, mahay hatsikana. Nandray anjara tamina filatroana sy ny fanehoana fomba fitafy, sns. Taona 2015, nisongadina ilay fifamenoana talenta eo aminy sy i Mirana ary i Vanintsoa, tao anatin’ny tarika RyKala Vazo. Somary manana feo iva izay izy tao amin’ny tarika.« Anisan’ny fahatsiarovana lehibe taminay ny fivoahana voalohany tany ivelany sy ny fanatontosana fampisehoana tamin’izany dia izany ary ireo hanihany kely… Vina napetrany ny hitondra manerana izao tontolo izao ny « modern trad ». Iray amin’ireny ny fandehanana any Kanada sy any Etazonia nokasina amin’ity taona ity », hoy i Vanintsoa. « Olona tia mifanakalo hevitra izy. Tia mizara am-pitiavana ny mozika. Miteraka fahabangana lehibe ho an’ny tarika ny tsy maha eo azy intsony », hoy i Mirana.Hiala ao an-tranony ao Manjakaray, rahampitso, ny nofomangatsiakany ary hoentina atao veloma farany ao amin’ny FJKM Antoby Fitahiana Anjozorobe alohan’ny hanafenana azy ao amin’ny fasam-pianakaviana ao Antoby Anjozorobe ihany.Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Mitchou rehetra sy ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.HaRy RazafindrakotoL’article RyKala Vazo: nodimandry i Mitchou a été récupéré chez Newsmada.
Anosikely-Ambatoboeny : Jamà roa maty voatifitry ny dahalo
Tena faritra anjakan’ny tsy fandriam-pahalemana ny any amin’ny disitrikan’Ambatoboeny. Saika andrenesana vonoan’olona sy asan-jiolahy hatrany any amin’io disitrika io. Jamà roalahy indray mantsy no maty voatifitry ny jiolahy. Tao amin’ny fokontany Anosikely, kaominina sy disitrikan’Ambatoboeny, ny alakamisy heriny lasa teo, tokony ho tamin’ny 07 ora maraina no nisehoan’izany. Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana, dia dahalo miisa 56 lahy nitondra basim-borina sy zava-maranitra no nangalatra omby 600 tao amin’ny fokontany Anosikely. Nisy avy hatrany fanarahan-dia nataon’ny vatan-dehilahy teo an-tanàna niaraka amin’ireo fokonolona manodidina ny fokontany voatafika. Tamina tanàna kely iray tsy lavitra ity toerana nisehoan’ny fandrobana no nifankatratra ny roa tonta. Teo no nisian’ny fifandonana ary naharitra 15 minitra izany. Tsy naharesy tosika ny dahalo ireo fokonolona, ka vaky nandositra no sady nampandre antso an-telefaonina ny Jamà mpiambina tanàna teo amin’ny manodidina ny toerana voatafika. Nisy nalaky ny sakana nataon’ireo Jamà dimy lahy sy ny fokonolona, tany anaty ala izay lalana tokana ihany. Vao nahatazana azy ireo ny malaso dia nitsoaka, ka raikitra ny fifanjevoana sy fifampitifirana, ary naharitra adiny iray izany. Mbola vaky lefa ihany ireo fokonolona sy ny Jamà telolahy, ka teo no nahafaty voatifitra ilay Jamà roalahy, satria izy roa irery no nifamaly tifitra tamin’ireo jiolahy. Nidina tany an-toerana malaky kosa ny mpitandro ny filaminana avy ao Ambatoboeny nanao ny fizahana sy ny fanadihadiana. Mbola mitohy ny fanarahan-dia sy ny fikarohana ireo mpanafika hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra. RatantelyL’article Anosikely-Ambatoboeny : Jamà roa maty voatifitry ny dahalo a été récupéré chez Midi Madagasikara.